အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်များကြားမှ အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံအကောင်းဆုံး လူ ( ၅ ) ဦး - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်များကြားမှ အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံအကောင်းဆုံး လူ ( ၅ ) ဦး
November 11, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတခေါက် ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အသက်အန္တရာယ်ဘေးကနေ ကံကောင်းစွာနဲ့ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ လူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ဘယ်လောက်တောင် ကံကောင်းသွားကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ကား( ၂ ) စီးကြားထဲ ရောက်သွားပေမယ့် မထိခိုက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ကားလမ်းမပေါ် စက်ဘီးစီးသူတွေ အတွက်ကတော့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင် အတော်လေးကို အန္တရာယ်များတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ ။ ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာဆိုရင်လည်း စက်ဘီးစီးသူ တစ်ယောက်ဟာ ထရပ်ကား နဲ့ အိမ်စီးကား အချင်းချင်း တိုက်မိတဲ့ကြားထဲကို ရောက်ရှိသွားတာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ စက်ဘီးစီးသူဟာ ခြစ်ရာလေးတောင် မထင်ပဲ အသက်အန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို မီးပွိုင့်မှာ တပ်ထားတဲ့ CCTV ကနေ မှတ်တမ်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လမ်းမကြီး ပေါ် စက်ဘီးစီးသူတွေ အတွက် သတိထားနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ အိမ်ပေါ်ကို လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပေမယ့် လွတ်မြောက်ခဲ့သူ
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ( ၂၀၁၄ ) ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန် နိုင်ငံ ၊ ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်မှာ လေယာဉ်မှုးတစ်ဦးဟာ မောင်းနေစဉ်အတွင်း လေယာဉ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ အိမ်တစ်အိမ်ပေါ် ပျက်ကျခဲ့ပါတယ် ။ အနီးနားက လူတွေ လာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ လေယာဉ်မှုးဟာ ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ လေယာဉ်ထဲက ထွက်လာတာကို တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုပြီးကံကောင်းတာကတော့ ထိုလေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ အိမ်ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဟာ မိသားစုလိုက် အပြင်သွားနေချိန် ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ပါ ကံကောင်းပြီး အသက်ဘေးကနေ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ကံကောင်းမှုဆိုတာ အတော်လေးကို ဆန်းကြယ်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ မိုးကြိုးပစ်ခံရပေမယ့် အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ
ဒီတစ်ခါပြောမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ အတော်လေးကို ဆန်းကြယ်လှပါတယ် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်က စုံတွဲ တစ်တွဲဟာ မိုးကြိုးမုန်တိုင်း တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး နေရာတစ်ခုမှာ ပိတ်မိနေတာပါ ။ ဒီအချိန်မှာပဲ သူတို့စုံတွဲ ထံကို မိုးကြိုးပစ်တာခံရပေမယ့် ကံကောင်းစွာနဲ့ အထိအခိုက်မရှိကာ လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထို စုံတွဲရဲ့ ပြန်လည်ပြောပြချက်အရ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ မိုးကြိုးအပစ်ခံရတဲ့ အချိန် လက်ချင်းအတူဆုပ်ကိုင်ထားတာကြောင့် လွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ ပြောပြချက်အရ မိုးကြိုး အပစ်ခံရတဲ့အချိန် လက်ချင်း ကိုင်ထားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွေဆီ လျှပ်စီး ပျံ့နှံ့အောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်သွားပြီး အသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်မိတာလို့ ဖြေကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ကားရှေ့မှန်ကို ပုဆိန် မှန်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
အခု တစ်ခါမှာတော့ အဝေးပြေး ကားလမ်းပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု အကြောင်း ကို ပြောပြပေးမှာပါ ။ ဖြစ်ပုံကတော့ အိမ်စီးကား တစ်စီး ဟာ သူ့ အရှေ့ က ထရပ်ကား တစ်စီး နဲ့ ခပ်ခွာခွာ ကနေ မောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် ထရပ်ကား နောက်ဖုံးက ပုဆိန် က အိမ်စီးကားကို လာမှန် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကံကောင်းတာကတော့ ဒီလို တွေ မဖြစ်ခင် အကွာအဝေး လှမ်းလှမ်း ကနေ မောင်းခဲ့တာကြောင့် ကားရှေ့မှန်ကို ထုတ်ချင်းပေါက်အောင် ပုဆိန်က စိုက်သွားပေမယ့်လည်း ယာဉ်မောင်းသူ ခမျာ အသက်ဘေးကနေ သီသီလေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ကားမောင်းသူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်အရှေ့မှာ ပစ္စည်းတင်ထားတဲ့ ကား ရောက်နေတာဆိုရင် သတိလေးထားပြီး ခပ်ခွာခွာကနေ မောင်းဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်နော် …. shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အမျိုးသား တစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက နာမည်ကြီး ထင်ရှားလှတဲ့ နော်မန်ဒီ ကမ်းတက် တိုက်ပွဲ တစ်ခုမှာ အမျိုးသား တစ်ဦး လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလို နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေရင်း ရန်သူ ဘက်က ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆန်က အမျိုးသား တစ်ဦးရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံကောင်းချင်တော့ သူ့ အိတ်ထဲမှာ အမြဲဆောင်လေ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကြောင့် ကျည်ဆန်က ကိုယ်ထဲကို ထုတ်ချင်းပေါက်ပြီး မမှန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အဖြစ်အပျက်ဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက သေကံမရောက်ပဲ ကံကောင်းစွာနဲ့ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အသက်ဘေးကနေ သီသီလေး လွတ်သွားခဲ့တဲ့ ကံအကောင်းဆုံး လူတွေထဲက တစ်ချို့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
Shwe Khit Online TV မှရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ယခုဆောင်းပါးကိုတခြားပေ့ချ်များတွင်ကျေးဇူးပြု၍ကူးယူဖော်ပြခြင်းမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မိချောင်းရဲ့ ဗိုက်ထဲကနေ နှစ် ၆၀၀၀ အကြာကရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို တွေ့ရှိခဲ့သူ